Iifonti zoqobo zeTayibhile: Ezona fonti zilungileyo kwiiTayitile ezinkulu | Abadali be-Intanethi
Iintlobo zoqobo zokuchwetheza izihloko
UNerea Morcillo | 08/05/2022 17:00 | Imithombo, Izibonelelo
Olunye lolona yilo lubalaseleyo lwenziwe ngeyona ndlela ilungileyo yokuchwetheza. Kwaye akunakulindelwa ukuba ezi ntlobo zochwethezo zimele ukugqibelela kolu melo. Ukuba unomdla malunga nehlabathi lefonti kunye noyilo lokuchwetheza, esi sisithuba ubufuna ngokungathandabuzekiyo.
Kule posi, asizanga kuphela ukuba sithethe nawe malunga nokuba yeyiphi i-typography efanele iprojekthi yakho, kodwa kwakhona, siza kukubonisa ezinye zeentsapho ezibalaseleyo, ngale ndlela, uya kuzazi iintlobo ezahlukeneyo ezikhoyo, ukuzisebenzisa kamva kuyilo lwakho.
Ungahlali nentandabuzo kwaye uhlale nathi kude kube sekupheleni.
1 iintsapho zefonti
1.2 Intonga eyomileyo
2 Imizekelo yeefonti zezihloko
2.1 Rhu lumente
2.10 Poiret enye
Xa sithetha ngeentsapho zefonti, Sithetha malunga nendlela amafonti ahanjiswa ngayo okanye afakwe kwikhathalogu kuyilo. Ngokomzekelo, ezinye iindlela zokuchwetheza zahlukile kwezinye ngenxa yeemilo zazo, okanye ezinye, kwelinye icala, ngenxa yento eziyidluliselayo.
Siqala ngeqela lokuqala eliphambili, iqela elo yahlulwe yaba ziindidi ezine eziphambili nokuba kwezi ndidi, zahlulwe zaba zezinye. Ekuqaleni, kusenokubonakala ngathi lihlabathi elingenasiphelo, kodwa sithembisa ukuba liya kuphela ngokukhawuleza.
Ezi ibiziindidi ezi-4 zokuqala zeefonti, ngoku siza kubona iindidi apho olu hlobo lweefonti lwahlulwe khona.
Ngaphakathi kweqela lamaRoma sifumana amacandelwana amahlanu okanye iindidi zesiRoma
NamaRoma Ziyaziwa njenge-serif typefaces. kuba ziqulethe i-serif echazwe kakhulu kwiifom zazo. Zinoyilo oluqhelekileyo, kuba yayizezona zichwephesha zokuqala ukuyilwa, ngakumbi ngamaxesha amaRoma, zikrolwe ematyeni.
Ziluncedo kakhulu ukuba ujonge imbonakalo yakudala kunye nenzulu. Ukongezelela, ngokuqhelekileyo baqonda i-95% yemibhalo esebenzayo yeencwadi ezininzi okanye izihloko, ngenxa yoluhlu oluphezulu lokufunda.
Ukuba sithetha ngeefonti zesans-serif sifumana amacandelwana amabini aphambili
Ii-Sans-serif typefaces nazo Ziyaziwa njenge-sans serif typefaces. ukuba ngokungafaniyo namaRoma, abonakaliswe ngenxa yokuba ayinayo i-serif ephawulweyo kuyilo lwazo.
Zizintlobo zochwethezo ezikwagqamayo kwinkangeleko yazo entsha nekhoyo ngoku. Zinophawu olulula ngokufanelekileyo kwaye zikwajongwa njengoonobumba obufundekayo. Ukusetyenziswa kwayo kugxininiswe kwimixholo ephambili kunye neyesibini, kwaye nakumbhalo osebenzayo.
Kwicandelo elibhaliweyo sifumana amacandelwana amathathu angakumbi:
Ezi fonti ziphawuliwe kananjalo ngokwaziwa okanye ukubizwa ngokuba ziifonti ezibhalwe ngesandla okanye ezishicilelweyo. Inkangeleko yabo ibenza babe nobuchule bokubhala okanye bobugcisa bokubhala. Kwaye usetyenziso lwayo luthatyathwe kuphela kwizihloko ezinkulu, kuba hayi iifonti ezifundekayo zokubhaliweyo. Zikwasetyenziswa rhoqo kuyilo olunje ngeepowusta okanye amakhadi okuposa kwimisitho ethile.
Kwimithombo yokuhombisa sifumana amaqela amabini aphambili:
Ngokungathandabuzekiyo zezona fonti zobugcisa, kuba kuxhomekeke kwindlela eziyilwe ngayo zinokuthathwa kwiintlobo ezithile okanye kwiintlobo zeeprojekthi ezahlukeneyo. Olunye ubungqina obubalaseleyo luphawu lweDisney.
Imizekelo yeefonti zezihloko
I-Governos ithathwa njengoyila kakhulu kwaye ibetha i-sans serif typeface, ngokunika kunye nokuvuselela amaziko athile afana neevenkile eMiami, imelwe ngelo xesha ngoyilo olufana ne-Art Deco.
Ithathwa njengefonti enobuhlobo ngokufanelekileyo ngenxa yeemilo kunye noyilo. Ukongeza, iqulethe ubukhulu obubonakalisa kakhulu kwaye ijike ibe yi-typeface yayo kwiiprojekthi ezinobomi kunye nezobuqu. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba ujonge uhlobo lochwethezo ofuna ngalo ukutsala umdla, ngokungathandabuzekiyo lo luhlobo lochwethezo olubonisiweyo.
Ifonti: Ifonti nomatse
I-Suprema inokuba lolona lwimi lunomdla olujongeka kwijiyometri kwithala leencwadi liphela esiza kukubonisa lona. Ifana kakhulu neFutura eyaziwayo nguPaul Renner, kwaye ayisiyiyo loo nto, inika inkangeleko entle kakhulu kwaye enobuhlobo kuyilo lwakho. Olunye umba olubonakalisa kakhulu olu chwethezo kukuba lunoluhlu olufundekayo oluphezulu, nto leyo eyenza ukuba ibe yi-typeface efanelekileyo kulo naluphi na uhlobo lombhalo. Sukuhlala ngaphandle kokuzama olu hlobo lwefonti, kuba luyila kwaye ngaphezu kwako konke, luyimvelaphi kwaye lunomtsalane.
Wamkele wonke umntu kwitypography yekamva okanye indawo. Yindlela yokubhala ethi, ngenxa yoyilo lwayo, ithathwa njengenye yezona zinto zikhoyo ngoku kunye nezangoku. Ukongeza, iqulethe imigca emincinci kangangokuba ifaneleke ngokupheleleyo kwaye iyilelwe ukufundwa. Ihlala idibanisa kakuhle kwimidiya efana neepowusta, nakwisazisi senkampani, kuba uyilo lwayo luluyilo kakhulu kwaye lobuqu lumelwe kwiilogo. Ukuba usajonge i-typeface eya kwenza iiprojekthi zakho zibe lula kwaye zimangalise ngakumbi, awunakuphoswa, ngaphandle kwamathandabuzo.
Ngaphandle kwamathandabuzo luchwethezo olubalaseleyo ngobuhle bayo. Yifonti evela kusapho olubhalwe ngesandla, okanye ekwabizwa ngokuba ziifonti eziyilwe ngesandla, njengeyakudala esiyaziyo. Yifonti eyothusayo ngenxa yobuhlobo kunye nokufundeka kwayoUkongeza, enye inkalo okanye uphawu olothusa kakhulu ngolu hlobo lokubhala kukuba yeyangoku kwaye yangoku nangona ineentsingiselo zayo zakudala okanye zakudala. Yifonti eya kunceda iiprojekthi zakho ukuba zigqame ngakumbi, kwaye ngaphezu kwako konke, ziya kuzenza zibe nomdla ngakumbi.
Ukuba uhlobo lochwethezo olujongeka kwijometri esikhe salukhankanya ngaphambili lunomdla kuwe, awunakukholelwa kuchwethezo oluzayo. YiLombok, ifonti ethi, ngenxa yeemilo zayo, igqame ngomgca ngamnye oyilwe ngokwemilo yejometri eyahlukileyo nengaqhelekanga. Ithathwa njengefonti ye-serif, nangona ingenayo i-serif yakudala kunye nebizwa ngokuba yi-serif esiyaziyo nesiyibonayo kwiifonti zaseRoma okanye eziculiweyo, ine-serif yanamhlanje kuyilo lwayo. Umba onokuthi ngokungathandabuzekiyo ushiye nabani na owubonayo emelwe kuyo nayiphi na indlela evulelekileyo umlomo.
I-Koliko luhlobo lokubhala oluphawulwa ngokuba nonobumba besiLatini abanomdla kakhulu. Yifonti ethi, ngenxa yoyilo lwayo, iqulethe ukukhalipha kophawu lwayo kunye neendlela ezizezakhe ezibalaseleyo kwezinye. Yifonti efanelekileyo ukuba ujonge uhlobo lochwethezo olulawula ukuqaqambisa isihloko seprojekthi yakho okanye uyilo lwakho, olu lolona chwethezo lufanelekileyo. Ukongeza, enkosi kubume bayo obugxininiswe kakhulu, unokuyisebenzisa ukuqaqambisa amagama amancinci okanye oonobumba abayimfuneko. Awunako ukuphulukana nombono wolu yilo olunesibindi, oya kuludinga ngokungathandabuzekiyo kuluhlu lwakho.
I-Olivia yenye yeendlela zokuchwetheza ezigobileyo, ezibonakala ngokuyilwa ngesandla. Ngokungafaniyo nabanye, igcina isitayile esiluqilima nesizolileyo, ukuchwetheza okunomdla kunye nokucocekileyo onokuthi unakekele umsebenzi wakho ngendlela yobuchwephesha. Ukongeza, uyilo lwayo alunakwa, kuba igcina umlinganiswa oqhelekileyo wexesha leRenaissance kwaye idlala ngeenkcukacha ezithile eziqheleke kakhulu kwixesha langoku.. Luphawu olufanelekileyo lokumelwa kwindawo yentengiso, apho eyona njongo iphambili ikukutsala umdla wombukeli. Ungalibali ngaye kuba ugqibelele.
I-Quando lolona chwethezo lulula nolona lwendalo kuzo zonke esikubonise zona kolu luhlu. Ineemilo ezingqukuva kakhulu kuyilo lwayo, inkalo eyenza ibe yifonti enomdla kakhulu. Yifonti ye-serif, nangona i-serif enayo incinci kakhulu iyachazwa, ilungele iiprojekthi zakho zobuqu. Ukongeza, kulula kakhulu ukuyifumana kunye nokukhuphela, kuba unayo kwizicelo ezinje ngeefonti zikaGoogle. Awunasizathu sokungabi nayo kwifolda yakho yefonti, isimahla, awunakucela nantoni na engcono kuyo.
Ukuba ujonga igama elithi glamour kwisichazi-magama, umfanekiso wolu hlobo lochwethezo uvela nakwesiphi na isiqholo okanye isibhengezo sefashoni. Ngaphandle kwamathandabuzo, olona chwethezo lucocekileyo nolunomtsalane uya kuze ulubone. Ikwayeyosapho lwe-serif, kodwa ishiya ezinye iinkcukacha eziqheleke kakhulu kwixesha langoku. Yifonti ebanzi ngokufanelekileyo, eyenza ukuba ibe lukhetho olunokwenzeka kwiiprojekthi zakho zobuchwephesha.. Ungayisebenzisa kuzo zombini izihloko kunye noyilo lwebrendi, inkalo edlala kakuhle kakhulu kwaye iya kuba luncedo kuwe kumfanekiso olungileyo nobalaseleyo woyilo lwakho.
Yifonti ethi, ngenxa yoyilo lwayo, sinokuthi idibanisa kakuhle kakhulu kulo naluphi na uphawu lwe-pub yobumnandi eParis. Lulwimi olucocekileyo kakhulu kwaye kulula ukusebenza ngoyilo lwakho. Iqulethe iigophe kunye nemigca ecetywayo kuyilo lwayo kwaye inomdla kakhulu. I-drawback kuphela kukuba ayiqukethe inani elikhulu kakhulu leempawu, ngoko ke ineempawu eziqhelekileyo kuphela. Ngaphandle kwamathandabuzo, i-typeface eya kukubuyisela kwelona xesha lihle kwaye iya kukwenza ukhanye kwaye uphuphe kunanini na ngaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iintlobo zoqobo zokuchwetheza izihloko
Iifonti ze-Art Deco zokukhuphela
iilogo zohlobo lwempahla yodidi